Muxarram - Wikipedia
Muxarram (Reer aw xasan waa beel kamid ah‎ muḥarram) waa bisha koowaad ee Kalandarka Hijriga. Sida caadiga ah, bisha Muxaram waxay ka tirsan tahay "Bilaha Barakaysan". Bishani waxay ku dhamaataa 30 maalmood.
Bisha Muxaram waa bisha koowaad ee maalintiriska Hijriga ah. Taasi macnaheedu waa bilowga "Sanadka Islaamka". Ereyga "Muxarram" macnaheedu waa "la mamnuucay". Waxaa bishan loo yaqaana ineey tahay tan labaad ee ugu barakaysan; waxaa ka fadli iyo barako badan kaliya Bisha Ramadan. Qaar ka mid ah Muslimiintu waxay soomaan sadex cisho. Sidoo kale, maalinta tobanaad ee bishani waa "Maalinta Cashuura", taasi oo dadka Shiicada ah xusaan.
Wakhtiyada bilaabmeyso bisha Muxaram ee sanadaha 2009 ilaa 2025
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Muxarram&oldid=218138"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Oktoobar 2021, marka ee eheed 20:10.